SIWI's vision isawater wise world, where we recognize the value of water, and ensure that it is shared and allocated s...
Myanmar Water Portal postedanew blog post in Stockholm International Water Institute
"မမြင်နိုင်သော မြေအောက်ရေ ကို မြင်နိုင်အာင် ပြုလုပ်ခြင်း" ဆိုသည်မှာ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ရေနေ့အတွက် ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ မြေအောက်ရေ ကို...
"မမြင်နိုင်သော မြေအောက်ရေ ကို မြင်နိုင်အာင် ပြုလုပ်ခြင်း" ဆိုသည်မှာ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ရေနေ့အတွက် ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ မြေအောက်ရေ ကို ပိုမိုမြင်သာလာနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်း ၇ ချက်ကို SIWI(Stockholm International Water Institute) မှ Dr Jenny Gronwall က အောက်ပါအတိုင်း ဆွေးနွေးတင်ပြပေးထားသည့် အချက်များကို စာဖတ်သူများပိုမိုသိမြင်နားလည်...
Starts on January 14, 2019The SDG Academy and the Stockholm International Water Institute have come together to offer this MOOC on some of the most important water issues. We...
Starts on January 14, 2019The SDG Academy and the Stockholm International Water Institute have come together to offer this MOOC on some of the most important water issues. We focus on the key role water plays in the achievement of the Sustainable Development Goals, not least SDG 6, about sustainable water and sanitation for all. The course intends ...